वि.सं. २०७६ कात्तिक १०। आइतबार। इ.स. २०१९ अक्टोबर २७। ने.सं. ११३९ कौलागा। कार्तिक कृष्णपक्ष। चतुर्दशी, ११:५० उप्रान्त औंसी।
स्वास्थ्य सबल बन्नुका साथै काममा उत्साह जाग्नेछ। चुनौती पन्छाएर पनि काम बनाउन सकिनेछ। शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् भने प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। पुरुषार्थी कामले समाजमा स्थापित बनाउन सक्छ। रोकिएका काम बन्नाले मनग्गे लाभ हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने नयाँ योजना शुभारम्भ गर्ने समय छ।
स्वास्थ्यका कारण काम रोकिन सक्छ। अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनुपर्ला। परिस्थितिवश योजना अधुरै रहनेछ। हल्लाको पछि लाग्दा व्यर्थैमा दु:ख पाइनेछ। आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउनेछन्। साँझदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ। रमाइलो जमघटमा सहभागी बन्ने अवसर जुट्नेछ। सहयोगीहरूको साथले काममा उत्साह जगाउनेछ।
आफन्तसँग असमझदारी बढ्नेछ भने घरेलु समस्याले निराश तुल्याउन सक्छ। तत्कालको फाइदा हेर्दा पछिलाई घाटा हुन सक्छ। बेसुरमा बोल्ने बानीले दुःख पाइनेछ। विशेष योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला। साझेदारीमा समस्या आउनाले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइएला। स्वास्थ्य पनि कमजोर रहन सक्छ।
छोटो समयमा राम्रै उपलब्धि हातलागी हुनेछ। स्रोत-साधन जुट्नाले गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मिहिनेतले दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। नयाँ काम शुभारम्भ गर्ने मौका छ। साँझतिर हिस्सेदारसँग असमझदारी बढ्नाले सम्झौता टुंगिन सक्छ।
आत्मविश्वासको कमीले पछि परिनेछ। शुभचिन्तकहरूको भावनालाई बेवास्ता गर्दा दु:ख पाइनेछ। खर्च हुने डरले सताउन सक्छ। वादविवादबाट टाढा रहनुहोला। बलजफ्ती गर्ने बानीले आफैंलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहनुहोला। आजको श्रमबाट पछिलाई फाइदा हुनेछ। साँझदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले कर्मयोग सबल बन्नेछ।
आकस्मिक खर्चले अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ। बेलैमा होस नपुग्नाले केही चुनौती झेल्नुपर्ला। समय दिन नसक्दा काम बिग्रन सक्छ। लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आउन सक्छ। आक्षेप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन् भने सहयोग गर्नेहरू कमै भेटिनेछन्। शुभचिन्तकहरू समेत टाढा हुने समय छ। धेरै लगानी परे पनि साँझदेखि मनग्य फाइदा हुनेछ।
दैनिक आवश्यकता पूरा हुनेछन् भने मिहिनेतको फल प्राप्त हुनेछ। आम्दानी बढ्नाले उत्साह जाग्नेछ। श्रमको उचित मूल्य पाइनेछ। व्यापारमा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ। छोटो समयमै राम्रो उपलब्धि हातलागी हुनेछ। रोकिएको काम बन्नेछ भने जिम्मेवारी समेत बढ्न सक्छ। दिगो कामलाई लगानी गर्नुपर्ला। साँझदेखि खर्चिलो काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
उपलब्धिविहीन काममा समय बित्नेछ। अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्नेछ। आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउनेछन् भने पहिलेका सहयोगीहरू पछि हट्न सक्छन्। आफ्ना सूचना बाहिरिनाले समस्या आउला। कामप्रति गम्भीर नबन्दा अवसर गुम्न सक्छ। साँझदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ। दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएको काम पनि सम्पादन हुन सक्छ।
सामान्य काममा धेरै धन र श्रम खर्चनुपर्ला। व्यस्तता बढ्नेछ भने शरीरमा कमजोरी तथा आलस्य अनुभूति हुनेछ। सानातिना काममै अल्झनुपर्दा लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा होला। गोप्य सूचना बाहिरिनाले समस्या पर्नेछ भने बन्दै गरेको काम बिग्रने डरले सताउनेछ। लेनदेन तथा हिसाबकिताबमा होसियार रहनुपर्ला। काम दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
व्यापारमा लाभ लिने समय छ। व्यवसायले रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर दिलाउन सक्छ। विभिन्न भौतिक साधन प्राप्त हुनेछन्। धन तथा ज्ञानको भण्डार बढ्ने समय छ। मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। प्रियजनसँग भेटघाट हुनुका साथै आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त होला। साँझदेखि केही अप्ठ्यारो परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
प्रदेश ३ को नाम बाग्मती र राजधानी हेटौंडा
उदयपुरबाट बम बिष्फोटन घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ
अपहरणको नाटक गरी फिरौती रकम माग गर्ने पक्राउ
अमेरिकामा थप २९ हजार बढीमा कोरोना संक्रमण